Soo-saaraha Laydhka Iyo Shirkadaha Iftiimiya -Giga Laydhka
Naqshadeynta nalka xirfadeed iyo soo saaraha nalka ilaa 1995.
Kor u qaadasho
U horseeday plasoond
U hoggaamiye pendent & kuwa kale
Darbiga / Spot / Track
Lagu dhisay hoggaamiye
Soosaarayaasha Lamp wuxuu ku takhasusay soo saarista ku-soo-dejinta iftiinka iyo nalalka tayada. Diirad saarida naqshadda iftiinka ee hogaaminta, waxsoosaarka, iyo xalka.
Kala soolayaasheena ayaa daboolaya laambadaha qurxinta iyo iftiinka ganacsiga.
Giga oo iftiiminaya naqshadda gudaha ee 'Classic' 0465
Saqafka saqafka& LED PENDANTT 0465 taxanahaQaabka: nalka casriga ah, laambad casri ah, laambad qurxinta gurigaWaxyaabaha: macdanta birta + acrylicCabbir: dia. 400mm / 600mm / 800mm / 800mm / 800mmLumen: 80-85lm / W, BixinMidab: Sandy Caddaan / Sandy Black / Dahab Daran / Rinjiyeyn alwaax ahIsha iftiinka: LED 2835Shahaadada: CE / CB / VDE / Tuv / Ul / ETL / SAA
Giga oo iftiimiya naqshadda gudaha ee '512'
Guri-qaaradTaxana maya.: 0512Style: nalka dambe ee boostadaQalabka: bir bir ah& AcryliloCabbir: dia. 550mm / 800mm / 800mmDhamee: rinjiyeyntaIsha iftiinka: LED 3030Shahaadada: CE / CB / VDE / Tuv / Ul / ETL / SAA
Giga oo iftiimiya naqshadda gudaha ee loo yaqaan 'Classic' 20210
Gigagight ee lambarka 36, ​​Zhongshan laba waddo, Shiqi, Zhongshan, Guangdong, china (koodhka boostada: 528400) waxyaabaha ugu muhiimsan 20210.Iyada oo khibrad soosaarka hodanka ah, oo had iyo jeer ay bartaa tikniyoolajiyad shisheeye oo horumarsan oo ay soo bandhigto qalab casri ah. Ka sokow, waxaan leenahay nidaam maareyn oo tayo leh oo codka ah si aan u fuliyo kormeer tayo adag leh. Waxaas oo dhami waxay bixisaa xaalado ku habboon soo saarida tayo sare leh.
Giga oo iftiimiya qaabeynta gudaha ee naqshadeynta 20169
LAMBARKA LAMBARKA CEDING, LED PANENTANTWaxyaabaha: aluminium + bir + acrylicCabbir: dia. 420mm / 600mm / 800mm / 800mmLumen: 4300lm, 5270lm, 8600lmMidab: Sandy Caddaan / Sandy Black / Dalind XaddidayIsha iftiinka: LED 2835Shahaadada: CE / CB / VDE / Tuv / Ul / ETL / SAA
OEM / ODM Adeegyada
Iftiiminta Giga waa soo-saareyaal xirfadle xirfad leh iyo sidoo kale lammaane awood badan oo loogu talagalay alaabada la keenay iyo mashaariicda. Iyada oo in ka badan 25 sano oo waayo-aragnimo ah oo wax soo saarka loo soo saaray badeecadaha ugu horreeya ee suuqyada Yurub, shaki kuma lihin inaan aamin nahay inaan samir nahay, waxaan nahay kalsooni, annaga ayaa mas'uul ka ah waana mas'uul ka nahay. Waan ognahay, oo leh dulqaad dheeri ah iyo kacsi badan, waxaan haysannaa fursado badan oo aan ku siin karno sharciyo fiican macaamiisheenna. Marka, waxaan had iyo jeer ku adkaysannaa "Ujeedada heer sare ah, dadka ku hanuunsanaa, aaminaada iyo guusha ku guuleysiga ruuxa waxbarashada iyo ganacsiga."
1. Naqshadeyntayaga: Ka sokow heer sare ee aan ka helnay ganacsiga ODM, waxaan sidoo kale bixinaa adeeg oEM oo tartan ah
2. Khibrad leh: In kabadan 25 sano oo ah soosaarayaasha qurxinta guriga ee xirfadleyda ah, lammaanahaaga aaminka ah.
3. OEM / ODM: Waxaan horey u dhoofinay boqolaal wax soo saarkeena ah macaamiishayada dalallo kala duwan sanad walba
Aasaasay xiriir adag oo lala yeesho suuqa guud
Xirfadleyda shumaca Shiinaha shumaca-Soosaarayaasha nalalka Giga
Heerka tayada sare leh wuxuu ku socdaa qaabeynta iyo wax soo saarka.
Iftiinka Giga waa mid xirfad-yaqaan ah oo muddo dheer soo saaraya iftiinka iftiinka iyo dhoofinta. Waxaa taageeray in ka badan 25 sano oo la soo saaray wax soo saarka laambadaha ah ee dhoofinta kaliya, waxaan macaamiisha u adeegnay Yurub, waqooyiga Ameerika iyo Koonfurta Ameerika si isdaba joog ah.
Laga bilaabo iftiinka ugu fudud, nalalka Giga ayaa fiiro gaar ah siisay baahiyaha macaamiisha Yurub iyo Mareykanka. Waxaan ka bilownay muunadda muunadda ee ay soo bandhigtay macaamiisha oo si tartiib tartiib ah khibrad u urursaday qaabeynta waxsoosaarka. Iyada oo la fahmay qaab-dhismeedka badeecada iyo quruxda iftiinka iyo hooska, si tartiib tartiib ah ayaan u horumarinay naqshadeena badeecada.
Maanta, nalalka Giga waxay leedahay laba saldhig oo wax soo saarka ah oo ku yaal magaalada Zhongshan City, gobolka Guangdong, Shiinaha, oo leh in kabadan 1000 alaab. Waxaan haynaa badeecado badan oo kala duwan. Iyada oo ku saleysan qaab casri ah, alaabooyinka ayaa daboolaya gudaha gudaha ee dibedda, qurxinta ganacsiga.
Iftiinka Giga wuxuu soo galay garoonka uu hogaaminayo muddo dheer. Ilaa iyo 2013, waxaan soo saarnay nidaam shey oo gaar ah. Qeybta badeecada hogaaminta ayaa sidoo kale si dhakhso leh kordhay. Isku-darka hoggaaminta iyo darawalka, xakamaynta tayada ee qaybaha korantada iyo adeegsiga qaan-gaarka ah ee raaxada iftiinka ee nasashada waa tartanka aasaasiga ah ee laydhka giga.
25-kii sano ee la soo dhaafay, Iftiiminta Giga ayaa qaaday "dadka u oggolaanaya dadka, raaxada iyo diirimaadku waxay ka yimaadeen iftiinka iyo hooska" aragtidiisa, waxaana looga go'an yahay inay horumar la yeeshaan naqshadeeyayaashii ugu dambeeyay iyo moodada, laakiin waa wax la yaab leh Qiimaha.
Sanadkii 2021, "Kyocera Falssunaphy" ayaa lagu dhejiyay saaxiib kasta oo qalbi furan.
Ku qanacsanaanta ka timaadda macaamiisheena tayo wanaagsan iyo adeeg ayaa weligiis sii joogi doona mudnaanteena weligaa!